Dastuurka Jubbaland oo wax ka badal lagu sameeyay – Radio Daljir
Dastuurka Jubbaland oo wax ka badal lagu sameeyay
Maarso 21, 2016 3:16 b 0
Garacad, 21, March, 2016-(Daljir)_Mudanayaasha barlamaanka maamulka Jubbaland ayaa meelmariyey codsigii madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ee ahaa inay waxkabedel ku sameeyaan dastuurka maamulkaasi.
Baarlamaanka Jubbaland ayaa Saaka u fadhiisatay Codsiga Madaxwayne Axmed Madoobe waxaana soo xaadirtay 66 Xildhibaan, 7 Xildhibaan ayaa diiday 1 wuu ka aamusay 58 Xildhibaana waxay u codaysayin uu meel maro Codsiga Madaxwaynaha.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Jubbaland Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo Saxafada la hadlay ayaa ku dhawaaqay in ansax yahay Codsigii uu soo gudbiyay Madaxwayne Axmed Madoobe.
Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaan weli soodhamaystirin golihiisa xukuumadda wuxuuna wadatashiyo lawadaa beelaha goboladaasi isagoona wada shirar dibuheshiineed.
(Warsaxaafadeed Sawiro) Puntland oo soo bandhigtay Qasaarihii dagaalladii Suuj, Garmaan, Iyo deegaanka Dabakaran ee Gobolka Mudug.
RW Cumar: Puntland uma Baahna AMISOM
on Fursad Shaqo UNSOS: CHIEF OF SERVICE, SUPPLYWhere I send my cv
on Fursad Shaqo UNSOS: CHIEF OF SERVICE, SUPPLY[email protected]